के भन्छन्, १४औं महाधिवेशनपछि छायाँमा परेका प्रकाशमान
Fri, Jan 28, 2022 2:54 AM news@quicknepal.com
बिशाल पुरी २०७८ पौष ३०,शुक्रवार ०४ : १९ PM
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित प्रकाशमान सिंह पछिल्लो समय निष्क्रिय छन् ।
निष्क्रियतासँगै प्रकाशमान सिंहको राजनीतिक व्यापार बन्द भएको त होइन भनी विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
साथै, अबको उनको राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्छ भनी जिज्ञासा पनि एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिने क्रम पनि जारी छ।
शुशील कोइरालाले महामन्त्रीसम्म बनाएका प्रकाशमान सिंह पार्टीमा गणेशमान सिंहको लिगेसी बेचिरहेका थिए ।
उनी १४ औँ महाधिवेशन अघिसम्म संस्थापनइतर समूहमा रहेर सभापति देउवा र उनको टिमको आलोचनारत थिए ।
तर, उनी महाधिवेशनपछि संस्थापन समूहसँगै सहकार्य गर्न पुगेका छन् ।
किन छायाँमा परे प्रकाशमान ?
१४औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यासम्म संस्थापनइतर समूहबाट सभापतिको दाबेदार थिए सिंह ।
संस्थापनइतर समूहमा सहमति हुन नसकेपछि रामचन्द्र पौडेल मैदानबाट बाहिरिने निधो गरे भने प्रकाशमान र शेखर कोइरला नै प्रर्तिस्पर्धा उत्रिए ।
उनले दुई एजेन्डा बोकका थिए, संस्थापनइतर समूहमा हुँदा पनि र एक्लै सभापतिमा लड्दै गर्दा उनले आफ्नो एजेण्डा परिवर्तन गरेका थिएनन् ।
के थिए उनका एजेन्डा ?
पहिलो :एजेण्डा थियोे, केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन,
दोस्रो : पार्टी विधिसम्मत संस्थागत
यिनै एजेण्डा बोकेर सिंह चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । तर, उनले लज्जास्पद हार व्योहोर्नुपर्यो ।
जसले गर्दा सभापतिका लागि भएको दास्रो चरणको निर्वाचनमा उनी आफ्ना एजेन्डालाई लात हानेर देउवा पक्षलाई बोक्न पुगे । सिंहको यो कार्यशैलीले उनले बोकेका एजेन्डा गलत साबित मात्रै नगरेर उनको छविमा आँच पुर्‍यायो । त्यतिले मात्र नपुगेर कार्यदिशा नै बदलिदियो ।
सिंहले किन सघाए देउवालाई ?
सभापति निर्वाचनको दोस्रो चरणमा प्रकाशमान सिंहले देउवालाई समर्थन गर्ने कुरा बाहिरिएसँगै सनसनी फैलिएको थियो ।
सिंहबाट यो कुरा नबाहिरिउज्जेल कोेइरला प्यानल एजेन्डाका आधारमा निधि र प्रकाशमानको साथ पाउनेमा ढुक्क थियो ।
तर, सिंहले एजेन्डा छाडी देउवालाई समर्थनलाई चामत्कारी निर्णय गरिदिए । जुन निर्णय प्रलोभनमा फसेको भनी विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
एक स्रोतका अनुसार सिंहलाई देउवाले उपयुक्त समयमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन उनी फसेका छन् ।
देउवालाई समर्थन गरेपछि के भन्छन् प्रकाशमान ?
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १४ औँ महाधिवेशनको पहिलो चरणको निर्वाचनको म्यान्डेडअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा सघाएको बताएका छन् ।
कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर २ भक्तपुरले हिजो (बिहीबार) गरेको झन्डोत्तोलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले पहिलो चरणको निर्वाचनको म्यान्डेडअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा सघाएको बताए ।
नेता सिंहले केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी विधिसम्मत संस्थागत हुनुपर्ने एजेन्डा बोकेर महाधिवेशनमा मत मागेको स्मरण गर्दै मतदाताले आफूले अघि सारेका एजेन्डाअनुसार मत नदिएको गुनासो गरे।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा आफूले परिवर्तन हुनुपर्छ भने देउवाले नै सबैभन्दा बढी मत पाएपछि मतदाताको म्यान्डेडअनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई सहयोग गरेको उनले बताए ।
‘दुईवटा एजेन्डा बोकेर म यसपटक उठेको हुँ। एउटा केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। दोस्रो पार्टी विधिसम्मत संस्थागत हुनुपर्यो। त्यो एजेन्डामा भोट मागेको हुँ,’ सिंहले भने, ‘फर्स्ट राउन्डको म्यान्डेट मैले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेकै नेतृत्वको पक्षमा देखियो। डेमोक्रेटिक पार्टीको डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजमा सहभागी भइसकेपछि म्यान्डेट त मान्नुपर्यो नि !’
उनले पहिलो चरणको निर्वाचनको म्यान्डेट मान्दा धेरैको टाउको दुखेको पनि टिप्पणी गरे। ‘मैले त्यो म्यान्डेट मान्यो भनेर कपाल दुखाई छ यहाँ,’ नेता सिंहले भने ।
नेता सिंहले चौधौं महाधिवेशनको दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाउँदा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको पनि गुनासो गरे ।
‘पार्टीमा शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्यो भनेर मविरुद्ध अनावश्यक भ्रम छरियो,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ’मेरो चरित्र हत्याको प्रयास पनि गरियो। सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गरिएको छ । लेखिएको छ ।’
उनले आफू गणेशमान पुत्र भएकै कारण मात्रै राजनीतिमा नआएको पनि प्रष्ट्याए । तल्लो तहदेखि नै आफू संघर्ष गरेर कांग्रेसको राजनीतिमा स्थापित हुँदै आएको सिंहले जिकिर गरे ।
‘थाहा हुनुपर्यो, संगठन गर्दा सजिलो छ? नेताको छोरा भनेर पैसा कमाउनसम्म कमाएर म फलानो भनेर उभिन आएको छौं हामी ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामी ग्रास रुटदेखि नै जेल गएर आएको हो। पार्टीमा त्यसै लागेको हो ? अर्काको मिहिनेतमा टुपुक्क नेता बन्न आएका हौँ र हामी?’
उनले पार्टीभित्रैका नेतालाई हराएकाहरु पनि र जितेकाहरू पनि कांग्रेस नै हुने चलनले कांग्रेस अघि नबढ्ने बताए ।
’आफ्नै नेतालाई हराएका पनि कांग्रेस हुने, जितेका पनि कांग्रेस नै हुने, यसरी पार्टी चल्छ?’, उनले भने, ’राजनीति मेवा खाने क्षेत्र होइन । दल भनेको सेवा गर्ने हो । अब म यति वर्ष जेल गएँ भन्दैमा मतदाताले मान्दैनन् ।’
नेता सिंहले कोरोना महामारीबीच पनि सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पार्टीको काममा निरन्तर खटिरहन नेता–कार्यकर्तासँग आग्रह गरेका छन् ।